Tilmaamaha Miisaanka Wireless-ka ee HF300
Taxanaha HF132 Dua-line Multi-line...
HF22 Taxanaha IP67 waa la shahaado...
HX134B Ultra Power Low Buluug...
HX134F silig sax ah oo sarreeya...
Taxanaha HF12 Muujin Weyn oo tayo sare leh Tusiyaha Miisaanka ee xallinta sare
Tusiyaha Taxanaha Heavye HF12 waa hal-kanaal oo ah tusiyaha miisaanka guud ee xallinta sare.
Waxaa lagu dhejiyay xayndaab balaastiig ah oo ABS ah, oo leh 6-digit 7-qayb LED ah ama bandhig LCD ah, furayaasha hore ee 6-badhanka, batari awood sare leh oo ku dhex dhisan, iyo sidoo kale is-dhexgal isticmaale oo si fudud loo isticmaali karo, hawlo badan, iyo software iyo qalabyo badan oo kala duwan, waa tilmaame miisaan oo ku habboon miisaannada iyo codsiyada kala duwan, sida miisaanka kursiga, miisaanka sagxadda, miisaan-hubin, cabbirka tirinta, iwm.
HF22 Taxanaha IP67 shahaado aan biyuhu lahayn oo Muujinaya Miisaanka Qaraarka Sare
Tusiyaha miisaanka tayada sare leh ee Heavye HF22 wuxuu ku habboon yahay hawlo miisaan joogto ah ama firfircoon. Iyada oo leh xagasha muuqaalka buuxa ee FSTN LCD ama bandhig LED, waxay u oggolaaneysaa hawlo sahlan oo raaxo leh goobta warshadaha kala duwan.
Tusiyaha Heavye HF22 wuxuu la socdaa guryo adag oo bir ah oo bir ah, waana IP67 shahaado, taas oo ka dhigaysa doorashada ugu habboon ee codsiyada miisaamidda warshadaha iyo sharciga-ganacsiga ee deegaannada adag ama alaabooyinka leh shuruudaha nadaafadda adag. Warshadaha sida cuntada, daawooyinka, iyo kiimikooyinka ayaa si gaar ah uga faa'iidaysan doona sifooyinkan goynta ah.
Taxanaha HF105 Ujeedada Guud ee Tayada Sare ee Miisaanka Dhaqaale
Tusiyaha Miisaanka Taxanaha Heavye HF105 waa tilmaame miisaan leh oo tayo sare leh, dhaqaale ahaan, ujeedo guud oo leh LCD-oran-oran ama iftiin sare oo iftiin leh oo LED ah si loo daawado.
Xayndaabka la qaabeeyey ee ABS waxa loo dhisay adkeysiga codsiyada miisaanka gudaha iyo dibadda ee adag. Iyada oo ay weheliso awoodda baytariga ee bilaa dayactirka ah, Heavye HF105 ee maaraynta baytariyada gudaha waxay si toos ah u ogaanaysaa danabka batteriga iyo heerka dallacaadda.
Iyadoo la socota soosaarka caadiga ah ee RS232 ee isku xirka kombuyuutarka ama daabacaha dibadda, iyo xirmada nooca T-ku-kordhinta ikhtiyaariga ah, tusiyaha miisaanka Heavye HF105 wuxuu ka dhigayaa mid ku habboon miisaanka kursiga iyo miisaanka madal loo isticmaalo adeegga cuntada ganacsiga iyo codsiyada guud ee miisaanka, bakhaarka iyo goobaha qaybinta miisaanka sagxadaha, dib u warshadaynta iyo alaabta dibadda oo miisaanaysa, iyo weelka warshadaha oo miisaamaya halkaas oo muuqaal sare uu faa'iido u leeyahay.
Taxanaha HF132 Multi-line Multi-line Computing Computing & Tirinta Tusiyaha oo wata Kiibadh Nambaro ah
Ku qalabaysan miisaanka, xisaabinta qaybaha, xisaabinta qiimaha iyo sifooyinka ururinta, Heavye HF132 taxane dual bandhigay tusaha waa qalabka ugu fiican ee noocyada kala duwan ee miisaamidda warshadaha iyo tafaariiqda, tirinta iyo cabbiraadaha baahida u baahan cimri dherer iyo saxsanaan qiimo weyn.
Tusiyaha laba-geesoodka ah ee Heavye HF132 wuxuu bixiyaa furaha lambar ee 20-muhiimka ah si loo galo aan la garanayn, oo dib u xasuuso miisaanka gabalka la yaqaan iyo qiimaha halbeegga ilaa 2*10 PLUs tooska ah. Iyada oo leh 2-dhinac, 3-line mid kasta oo isbarbardhiga sare ee LED ama bandhig LCD ah, waa tirinta saxda ah, isticmaale saaxiibtinimo-saaxiibtinimo iyo tilmaame xisaabinta qiimaha maalinlaha ah ee macaamilada miisaanka.
HX230F IP67 Gudbiyaha Wireless-Biyaha Aan-Aabaha ahayn ee Shaadhka leh oo lagu dhex dhisay baytari weyn
Heavye IP67 gudbiyaha bilaa-waayarka ah ee aan biyaha lahayn ee Heavye IP67 shahaadeysan waxaa lagu hayaa xero SS304 is haysta. Naqshadeeda nadaafadda ayaa u oggolaanaysa isticmaalkeeda codsiyada u baahan nadaafadda iyo heerarka nadaafadda ugu adag, sida cuntada iyo cabitaannada, dawooyinka-, habka warshadaha- iyo qalabaynta warshadda. Iyada oo ay ugu wacan tahay heerka ilaalinta heerka IP67, HX230F si fiican ayaa loo ilaaliyaa waxaana lagu nadiifin karaa nadiifiyeyaasha cadaadiska sare leh ama la shaqaynayo nidaamyada CIP (meel nadiif ah).
Iyada oo ay ku dhex dhisan tahay 4000mAh batari weyn oo Li-ion ah, waxay u beddeshaa calaamadaha laga helo dareemayaasha ku saleysan analogga culeyska sida unugyada culeyska iyo transducers si ay u dijitized signalka wireless-ka ee elektiroonigga kala duwan inta badan nidaamka warshadaha.
HX134F Gudbiyaha Wireless-ka Saxda ah ee Sare ee Guryaha Aluminium
Gudbiyaha Heavye HX134F Sub-1GHz RF waa gudbiye awood hoose ah oo sax ah oo hal kanaal ah. Ku qalabaysan sawaxan hoose oo sax ah oo 24-bit A/D ah oo leh diidmo 50/60Hz isku mar ah, waxay leedahay ilaalin shaandhayn heer sare ah oo heer sare ah.
Waxaa lagu dhejiyay xayndaab aluminium isku dhafan oo leh dhammaystir budo tayo leh, gudbiyaha HX134F RF wuxuu leeyahay dareen-qaade heer sare ah, xulashada iyo xannibaadda ISM ee soo noqnoqoshada raadiyaha shatiga la'aanta ah ee adduunka oo dhan, oo leh illaa 20 dBm adeegsadaha wax soo saarka RF iyo ilaa 800-mitir laba jiho isgaarsiinta wireless-ka, taasoo ka dhigaysa inay si fudud ula xiriirto xogta u dhexeysa qalabka elektaroonigga ah ee kala duwan halkaasoo masaafada dheer ee isgaarsiinta wireless ay tahay waajib.
HX134B Soo-gudbiyaasha Awoodda Hoose ee Bluetooth BLE gudaha Guryaha Aluminiumka
Iyada oo la socota ilaa -4 dBm isticmaale programmable 2.4GHz RF awood wax soo saar, gudbiyaha Heavye HX134B ultra low Bluetooth BLE4.0 waxaa loogu talagalay kuwa miisaamaya warshadaha halka isku xirnaanta Bluetooth si gaar ah looga baahan yahay.
Waxay ku dhex jirtaa aluminium isku xidhan oo leh dhammaystir budo tayo leh, waxayna leedahay dhammays hore oo dhammaystiran oo loogu talagalay hal ama ilaa 16x 350 ohm buundada xamuulka ama dareemayaasha.
D01 Mini-nooca Hanging Cabirka oo leh isku xidhka Bluetooth
Midkan yar ee is haysta ee Heavye D01 nooca yar ee cabbirka laadlaadku wuxuu awood u leeyahay inuu ku habboon yahay codsiyada qaadista ugu badan. Waxaa lagu heli karaa 100kg ilaa 500kg, waxay bixisaa dhismo adag, saxnaan sare, cabbir is haysta iyo qaadid xad dhaaf ah. Isticmaalka shirkadaha tamarta ee qaarad kasta, cabbirka D01 ayaa inta badan lagu dhejiyaa inta u dhaxaysa winch iyo tripod, taas oo u oggolaanaysa la socodka culeyska iyo hoos u dhigista badbaadada iyo kor u qaadista qalabka iyo shaqaalaha, waxayna isku dayday inay tahay qalab lagama maarmaan u ah bulaacada dhulka hoostiisa. biyaha, gaaska, iyo utility vault helitaanka.
Iyada oo ay si buuxda u shaqeynayaan kontaroolada badhanka riixida eber, tareenada, haynta, iyo beddelka halbeegyada kg, lb, N, miisaankani waa isku darka codka iyo nashqada farsamaysan ee la xaqiijiyay, oo leh qalabka elektiroonigga ah ee ugu horumarsan si loo bixiyo qaab muuqaal heersare ah. Waa wax badan, la isku halayn karo, sax ah oo sahlan in lagu shaqeeyo.
H1 Iskeelka Crane Is haysta
Heavye H1 miisaanka wiishashka is haysta waa doorasho caan ah oo ka dhex jirta xarunta adeegga birta iyo codsiyada kale ee warshadaha culus. Waxa ay soo bandhigtaa beddelka kharash-ool ah ee kuwa ay xafiiltamaan ee aadka u qaaliga ah haddana ikhtiyaar badbaado leh oo ka sarreeya miisaamayaasha wiishka ee qiimaha jaban. Miisaanka wiishashka H1 wuxuu bixiyaa awood sare, tayo, saxnaan, iyo badbaado qiimo hooseeya waxaana looga faa'iidaystaa aduunka oo dhan wax soo saar iyo codsiyo warshadeed oo kala duwan.
Sida dhammaan alaabada Heavye, miisaanka wiishashka H1 wuxuu helayaa qalab elektaroonik ah oo heersare ah, tayo dhisme oo aad u wanaagsan iyo jaanis shahaadeysan iyo tijaabinta caddaynta. Miisaanka wiishka culeyska culus waa mid sax ah, waxaana laga soo saaray alaab tayo leh, oo leh hoy sare oo aluminium alloy ah. Qayb kastaa waxa ay ku rakiban tahay muraayad weyn oo ifaysa oo LED ah oo si fudud loo akhriyi karo xitaa iftiinka qorraxda tooska ah. Midda fudud ee la isticmaalo sifada fog-fog ee badhamada waaweyn ee loo isticmaalo gacma-gashiyada galoofisyada iyo waxay siisaa xakamaynta iyo qabashada hawlaha. Inta u dhexaysa ku dallaca batteriga waxa lagu kordhiyaa habka kaydinta tamarta heeganka ah iyo sidoo kale habka daminta tooska ah.
D6 Cabirka Wiishka Wireless-ka oo leh Tilmaamaha La Qaadan karo ee Daabacaha ku dhexjira
Laga soo dhisay bir kaarboon oo tayo sare leh, cabirka wiishka ee Heavye D6 waxa uu leeyahay qaab dhismeed gudaha ah oo horumarsan. Naqshadani kaliya kuma siinayso badeecada awood aan la barbar dhigi karin ilaa saamiga miisaanka laakiin waxay sidoo kale bixisaa ilaalinta guud ee unugga rarka iyo gudaha elektiroonigga, taasoo ka dhigaysa miisaanka wiishkan xitaa ku habboon isticmaalka jawiga ugu adag.
Miisaanka wiishka bilaa-waayirka ah ee D6 waxa lagu heli karaa tiro heersare ah oo awood ah ilaa 50 tan. Awood weyn iyo naqshado gaar ah ayaa sidoo kale la heli karaa haddii la codsado. Dhammaan qalabka elektiroonigga ah si ammaan ah ayaa loogu rakibay meel adag. Ikhtiyaarada dheeraadka ah ayaa sidoo kale diyaar u ah isticmaalka shiidka iyo alwaaxyada ka badan rakibaadda saqafka sare ee heerkulka sare.
Iyada oo la adeegsanayo soo noqnoqda raadiyaha ISM ee fog, miisaanka wiishka wireless-ka ee Heavye D6 wuxuu bixiyaa kala duwanaansho wireless oo hogaaminaya warshadaha oo ah 1000m.